Akhriso:- Maxaa kaaga baxay warbixinta hab dhismeedka Amniga oo ay soo saaren Guddiyada Difaaca iyo Amniga | Entertainment and News Site
Home » News » xogwaran » Akhriso:- Maxaa kaaga baxay warbixinta hab dhismeedka Amniga oo ay soo saaren Guddiyada Difaaca iyo Amniga
Akhriso:- Maxaa kaaga baxay warbixinta hab dhismeedka Amniga oo ay soo saaren Guddiyada Difaaca iyo Amniga
daajis.com:- Waxaa sii xoogeysanaaya shakiga iyo muranka wali ka taagan hanaanka loo maraayo dhismaha ciidamada Qaranka waxaana si is dabajoog ah usoo baxaaya warbixino kala duwan oo lagu qeexaayo sida wax loo wajihi lahaa.
Waxaa saacadihii ugu danbeeyay soo baxay warbixin kooban oo si wada jira ay usoo wada saaren Guddiyada Difaaca, Arrimaha Gudaha iyo Amniga BFS.
Warbixinta ayaa ku saleysan dib u eegista labada Guddi ay kusoo sameeyeen hab dhismeedka Amniga Qaranka, kaasoo qorshihiisu yahay in la horgeeyo shirka la filaayo in gudaha bishaani uu ka furmo magaalada London.
Guddiyada ayaa sheegay in warbixinta ay tahay mid ka kooban ilaa iyo Todobo qodob oo looga hadlay kulankii su’aalaha lagu weydiiyay Rw Kheyre iyo aragtidii ka soo baxday.
HOOS KA AKHRISO WARBIXINTA GUDDIYADA EE DHISMAHA AMNIGA